အခြေအနေ မကောင်း ဗူး… Sq back to 1 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » အခြေအနေ မကောင်း ဗူး… Sq back to 1
အခြေအနေ မကောင်း ဗူး… Sq back to 1
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 29, 2015 in Opinions & Discussion | 12 comments
စစ်ဗိုနဲ့ကြက်ဖွတ်အမတ်ဟောင်း အူးတင်အေး ဦးစီးတဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော်မရှင်က မဲစာရင်း မှားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာယကံရှင် လာမပြောလျင် မတတ်နိုင်တဲ့။ ဒီမိုအတိုက်အခံများကို ပေါ်တင် စိမ်ခေါ်လိုက်တာပဲ.. အထူးသဖြင့် ဘွားဒေါ်ဂျီးကိုပေါ့ စ်..။ ပြောပြန်ရင်လည်း ကြောင်မင်း လွန်ရာကြမည်။ အန်အယ်လ်ဒီဖက်က မတရားဘူး.. လိမ်တယ် ပြောရုံကလွဲ ဘာမှ အစီအစဉ် ရှိပုံမပေါ်။ ဘွားဒေါ်တင်လားဆိုတော့ဟိုရှစ်ပူးတွေလည်း ဝေးလားဝါးလားပဲ။ ပြောကြေးဆို သူတို့ညစ်မည်ဆိုတာ အစောကြီးထဲက တွက်လို့ရသည်။ အော်ချက်ထုတ်တာအပြင် အခြားဘာများ စီမံထားကြသလဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရလျင် တပ်အူးကျွံခဲ့ပြီမို့ လည်စင်းခံ တိုးဖို့သာရှိအိ။
တကယ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်.. ဘွားဒေါ်လည်း လေပဲတိုက်သည်။ လက်တွေ့ လှုပ်မရ ဆိုပေမည့် ဒါတွေကို ကြိုမတွက်ခဲ့ဘူးလား၊ ဖက်ဆစ်စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြန်တွန်းလှန်ဖိုက ဘာမှ မပြင်ထားပဲ ဝင်တိုးခဲ့သလား။ မသိ နားမလည် ကြိုမတွက်ခဲ့လျင် ဘာလို့ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေသလဲ…။ ဒီအစိုးမရနဲ့ ပြည်သူ ဒါပဲတန်တယ်ဆို ဒီအတိုက်အခံနဲ့ ဒီခေါင်းဆောင် ဒါလောက်ပဲ တန်တယ် ဆိုရမည်။ ဒါဆို သမိုင်းတရားခံထဲ လူသစ်တွေ တိုးလာပြီပေါ့စ်..။ သိဘူးလေ ထင်တာပြောတာ….
ဘွားဒေါ်က ကြိုးတော့ ကြိုးစားတာပဲ.. ဖေဖေ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မဒေါ်ဂျီး.. ဘာညာနဲ့.. နောက်ဆုံးတော့နဖူးထုံးအတို့ခံရပီ အကစ်ခံရတာပဲ မဟုတ်လား။ သူတကယ်ပဲ စစ်တပ်ကို ပြောလို့ရမည် ထင်ခဲ့သလား။ တကယ်ပဲ ကိုယ်ကောင်းလျင် သူပြန်ကောင်းလိမ့်မည် နိုင်ငံရေးမှာ.. အထူးသဖြင့် အာဏှာရှင် နိုင်ငံရေးမှာ မျှော်လင့်ခဲ့သလား..။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တလျောက် သူလက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ သမတဘပြောင်၊ လွှတ်ကထအူးရွှေမန်း၊ ကာချပ်မအလ စတာတွေနဲ့ ပြောပုံ၊ဆိုပုံ ချဉ်းကပ်ပုံ၊ လွှတ်တော်ထဲမဝင်ခင် စစ်တပ်ကို ကမ်းလှမ်းအလျော့ပေးခဲ့ပုံ (သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတခုမှာဆို စစ်တပ်က ထွက်လာတဲ့ သတင်းမှန်လားမေးတော့ဘွားဒေါ်ဂျီး ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်ဘူး၊ အဲဒီသတင်း ဟုတ်လားလို့ ပြန်မေးနေတာ ဗီဒီယိုကလစ်ဖိုင်တခုမှာတွေ့တယ်။) အရတော့အ လို့ခံရတဲ့ သဘောပဲ။ ရွာထဲမတော့ခြိမ်းပဒီးနဲ့ မဲသွပ်…
ရွေးဂေါက်ပွဲ မဲစားရင်း မြို့တိုင်းမှာ ၃၀% ကနေ ၈၀% အထိမှားကြောင်း ဒီချုပ်က သတင်းထုတ်တယ်။ ဘွားဒေါ် မနေ့က ပြောတော့၅၅ရာနှုန်းအထိ တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ မှားကြောင်း ပြောတယ်။ အလဲဗင်းဂျာနယ်ကလည်း သူတို့သိတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ ထောက်ခံတယ်။ ရွေးဂေါက်ပွဲ အုတ်ကထ အူးတင်အေးကတော့ဒူးနှန့် ပျက်ပုံမြ။ ပြည်သူ ၉၂% ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ နာဂစ်ခြေဥတုံးက အဲလို မသိကျိုးကျွံပြု နေခဲ့ဖူးသလား။ စာရင်းတွေအရ စစ်တပ်က ကတိမတည်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးဂေါက်ပွဲမှာ မဲလာပေးသူ ၇၂% ဆိုလား။ လာမှည့် ရွေးဂေါက်ပွဲမှာလည်း အလားတူ ၇၅% သတ်မှတ်မည်ဆိုလျင်… လေးယောက်မှာ သုံးယောက် မဲလာပေးကြလိမ့်မည်။ တီဆဲ နာဂစ်ခြေဥ အရ ၂၅% လွှတ်တော်ကို စစ်ခွေးအမတ်တွေ ယူထားတယ်။ ကျန်၇၅% လုရမှာ…။
ပြသနာက အတိုက်အခံထဲ ဒီချုပ်နဲ့ အင်အားကောင်းတဲ့ ဒီမိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိတယ်။ တဖက်မှာ ဖွတ်နဲ့သပ်ချောင်ပါတီတွေ ရှိတယ်။ အန်ဒီဖွတ်နဲ့ တစညလို ပါတီတွေကတော့မြောင်းထဲရောက်တော့ မှာ.. စာရင်းမသွင်း (စောဒီး ပီအာရ်လော်ဘီ ဖွပ်ခံ့ကြော်ဂျီးရေ… … တာ့ တာ)။ ဖွတ်ကတော့ ရှင်းတယ် သပ်ချောင်ပါတီတွေက ဘယ်သူလည်း.. အထင်ရှားစုန်းက ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့နဲ့ ပြိုင်ဖက် ရှမ်းဒီမိုကရက်တစ် ပါတီလို စစ်တပ်နဲ့ပင်းရိုက်မည့် ကောင်မျိုးတွေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခြေဥပြင်ပွဲမှာ ဒင်းရို့ ပျက်ကွက်မဲ လုပ်ကြသတဲ့လေ။ ကိုယ့်ဖက်က ၇၅% ရတောင် စစ်တပ်အဆိပ်သား ခံနေလျင် ခြေဥပြင်မရတာမို့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဖွတ်နဲ့ဒင်းရို့ မဟာမိတ်၊ သပ်ချောင်များ တနေရာမှ မရဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ တနေရာ လွတ်ထွက်သွားလျင် အကုန်သွားရော။
ရှစ်ပူးတွေက ပြိုင်မည့် နေရာ၅၀တောင်းသည်၊ ဒီချုပ်က ၂၀ပဲ ကမ်းလှမ်းသည်သတင်း ထွက်သည်။ ဘွားဒေါ်အနေဖြင့် ရှစ်ပူး အား တကယ်လိုလျင်.. အခြေနေမှန် သုံးသပ်တတ်လျင်.. ကိုယ့် အမှားကိုယ် ဝန်ခံရဲလျင် ဒါထက် ပိုပေးသင့်သည်။ ပုဂ္ဂလိက အမြင်ပြောပါဆို ရှစ်ပူးများ တဝက်ပင်ရသင့်သည်။ မဖြစ်နိုင်ဆိုပါက သုံးချိုးတချိုး ဖြစ်သင့်သည်။ ဦးခေါင်းလို ဘွားဒေါ်က ခြေလက်လို လက်တွဲဖော်များစွာလိုပါသည်။ လက်ရှိ အမှားအယွင်းများ၊ အကျအဆုံးများတွင် ဘွားဒေါ်၌ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိ လက်တွဲဖော်များ အားနည်းသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကြားဖြတ်တုံးကလို ရန်သူ့သတ်ကွင်း နေပြည်တော်မြို့နယ်တွေ ထိုးပေးပစ်ပေါ့စ်..
ဘွားဒေါ်ကိုယ်တိုင် သူ့အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်များထဲ သာယာနေသလား..။ မပြောဓါတ်… ဟုတ်ခြင်လည်းဟုတ်မည် မဟုတ်ခြင်လဲမဟုတ်..။ မဟုတ်ဖူးတော့တပ်အပ်မပြောနိုင်ပေ။ သူအား လုံးဝယုံကြည်ထောက်ခံသူ ဒီချုပ်ဥက္ကဌဟောင်း ဦးတင်ဦးအား သူ့အဖေလိုကောင်းသူ၊ အကောင်းဆုံးလူဟူ ချီးမွှမ်းဖူးသည်။ သူ့နဲ့ ကလန်ကဆန်လုပ်သူ ဦးဝင်းတင်ကြတော့ဝေးခဲ့ကြသည်။။.. အင်း.. ဆုံးခါနီး သွားတွေ့ဖော်တော့ ရပါသေးတယ်လေ….
အနော်ကြောင်ကြီး သမထအစွမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်တာ အန်အယ်ဒီ တိုင်းဒေသတွေနဲ့ ပြည်နယ်မြို့တိုင်းမှာနိုင်မည်။ သတိထားရမှာ နယ်စွန်နယ်ဖျား နယ်စပ်မြို့တွေ။ အဲဒီမှာ ဒီချုပ်၊ ဒီမိုတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ ဖွတ် အပြိုင်လုရမည်။ ဒီချုပ်နဲ့ နယ်ခံတိုင်းရင်းသားပါတီ ညှိမရဆိုလျင် ရွေးဂေါက်ပွဲ အတိုက်အခံများ နိုင်ဖို့ တနည်းပဲကျန်သည်…။ ဘယ်လိုလဲ.. ကိုယ့်အခြင်းခြင်းထက် ဖွတ်ဆီကမဲ လုရမည်။ မြို့ကြီးတွေမှာ မဲပြတ်မည်မို့ ဖွတ်မဲရလည်း ပြသနာမရှိ၊ အမတ်က တနေရာပဲ ရှိသည်။
လူ၁၀၀မှာ ၇၅ယောက် မဲပေးသည်တွက်တာမို့ ဒီချုပ်၊ တိုင်းရင်းဒီမိုနှင့် ဖွတ် မဲတူလျင် တပါတီ ၃၃.၃% ရသည့်သဘောဖြစ်မည်။ ဖွတ်ကို အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် မဲပေးမည့်သူ ၃၀% ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းချက်များရှိသည်။ ဖွတ်ယူမည့် ၃၀%မဲကို နှိုက်နိုင်မှ အတိုက်အခံများ အခြေအနေကောင်းမည့် သဘောဖြစ်သည်။ သေခြာရန် ဖွတ်ကို ၂၀%ထက် ပိုပေး၍မဖြစ်။ တနည်း ဖွတ်အနေနှင့် ၃၅% ကျော်ခဲ့လျင် အဲဒီနယ်တွင်လည်း အတိုက်အခံနှစ်ပါတီ မဲကွဲခဲ့လျင် လူစာခွေးစားသွားမည်။ ဝုတ် ဝုတ်..
ဖွတ်မဲ ဘယ်ကရမည်လဲ။ နေရာတနေရာရနေတာ အဟုတ်ထင်တဲ့ ဝန်ထမ်းများစွာရှိသည်၊ သူတို့ပေးကျွေးကမ်းထားတဲ့ လူများ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းတွင်ရှိသည်။ စစ်တပ်တွင်းမှာလဲ လာနိုင်သည်။ နောက်ပြီး မဲလိမ်မှုများကိုပါ ထည့်တွက်ရမည်။ လွှတ်တော်တွင်း တနေရာမှ အလွတ်မခံနိုင်သည့် အနေအထားမို့… မဲဆန္ဒနယ်တိုင်း အရေးကြီးသည်။ အတွေ့အကြုံအရ ဖွတ်က ဘာလုပ်မလဲဆို ထင်သလို နေရာမရလျင် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ်တခုမှ အငြင်းပွားဖွယ်မဲအရေအတွက်နဲ့ နိုင်အောင်လုပ်မည်။ ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း စစ်သားတွေချီးဘဲ..။ တနေရာ နှစ်နေရာလေး အတွက်နဲ့ ရှေ့ဆက်မည့်ခရီး နှောင့်နှေးမည်၊ ပြသနာ မဖြစ်လို စသဖြင့် သပ်ချောင်များ၊ ဆိတ်စွမ်းအားရှင်များက ပူညံပူညံ လုပ်ကြဦးမည်။ ဘွားဒေါ်ကလည်း အဲလိုဖြစ်လျင် သဘောထားကြီးပြဖို့ များသည်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကြမှ တစ်ဖြစ်အူးမည်။
ဘာ ပြင်ဆင်ထားသလဲ။ အယင်လိုပဲ မတရားဘူး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိဘူး၊ ဆင်ဖမ်းမည် ကျားဖမ်းမည်နဲ့ပဲ ပြီးသွားကြမှာလား။ ခြေဥထောက်ခံ လက်မှတ်ထိုးလို ထောင်ကျတဲ့ ဗိုလ်မှူး၊ အသတ်ခံရတဲ့ သတင်းထောက်ကိုပါကြီး၊ မုဒိမ်းကျင့်အသတ်ခံရတယ် ကချင်ဆရာမနှစ်ဦး၊သေနတ်ပစ်ခံရသေဆုံးတဲ့ လက်ပံတောင်းလယ်သူမ ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ လက်ပံတန်းကျောင်းသား အရေးခင်း၊ မတရားထောင်အချခံရတဲ့ နော်အုန်းမြင့်…. အခြားဖြစ်ရပ် များစွာရှိသည်။ ဘာမျှ မည်မည်ရရ မလုပ်နိုင်..။ အဲလို ဆိုလျင်တော့ ကြိုပြောလိုက်မည်…. အခြေအနေ မကောင်းဘူး..။ ဒါက ရွေးဂေါက်ပွဲ ဝင်တဲ့အပိုင်း..
ကြံဒဗိုင်းက… ရွေးဂေါက်ပွဲ မဝင်ဘဲ ဆန့်ကျင်တာ။ သာမန်အားဖြင့် ဘွားဒေါ်ဂျီးအတွက် အချိန်နှောင်းခဲ့ပြီ.. ပြင်မရတော့ ။ လွှတ်တော်တွင်းမှာ နာဂစ်ခြေဥကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည် ကျမ်းကြိန်ခဲ့ပြီးပြီ။ ခြေဥကို ပြင်ဖို့ တော်ကီပွားတာကလွဲ အခြားမရှိ။ ဒါက ရွေးဂေါက်ပွဲ မဲစာရင်းမထွက်ချိန်အထိ..။ ထပ်ပြောဂျေးဆို သန်းကောင်စာရင်း အချက်အလက်တွေ မထုတ်ပြန်ချိန်အထိ။ နာဂစ်ခြေဥကို ၉၂% ထောက်ခံတယ် ပြောခဲ့တယ်နော်။ သန်းကောင်စာရင်း ထွက်လာတော့လူတွေသန်းနဲ့ချီ ပျောက်နေတယ်.. ဒါကတချက်။ ခုနောက်ဆုံး မဲစာရင်းအရ ၅၀% အမှားအယွင်းရှိဆို ၂၀၀၈က လုပ်ခဲ့တဲ့ ခြေဥမဲဆန္ဒခံယူပွဲ အတုဂျီး..ဒါတင်မက ဘပြောင် လိင်တက်လာတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲ တရားမဝင်… ၂၀၁၂ ဂျားဖြတ်လဲ အင်…။ အားလုံး အစစ်မဟုတ်လျင် တပ်က အယင်လို ပြန်ယူမည်ဆိုလည်း… သတ္တိရှိ ယူပါစေ..။ ကာချုပ်မအလ အဲလောက်မစွမ်း…
မြင်အောင် ပြောပါစို.. ပိုက်ဆံချေးထားလျင် ပြန်ဆပ်ရမည်၊ သို့သော်ချေးလိုက်တာ ငွေစက္ကူ အတုဂျီးဆို ပြန်ဆပ်စရာ မလို။ အစထဲက မှားလို့ အဲဒီစာချုပ် ပျက်ပြယ်တယ်.. အထမမြောက်…။ ခုလည်း ဒီသဘောပဲ..
အတုဆိုမှတော့အစစ်ပြန်ရေးဖို့သာရှိသည်။ ဘွားဒေါ် လွှတ်တော်တွင်းမှ ထွက်သွားစရာမလို..။ သွားမတက်ရုံသာရှိသည်။ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်အမတ်မှ မဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါဆို ခြေဥအရ ပေါ်လာတဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော်မရှင်လည်း ဂရုစိုက်စရာမလို။ ဘပြောင်ဂျီးလည်း သမဒမဟုတ်… အူးရွှေမန်းလည်း ငှက်ကထမဟုတ်။ ဗိုစုတ်ဗူးဂျီးသမ်းရွှေ အာဏှာပိုင်ပဲ…။ အားလုံး တစ်ကနေပြန်စမည်. .. Square back to 1.
အတိုက်အခံဘက်ကို မဲပေးမယ်လို့ သံသယရှိရင် အဲ့လိုထစ်ထားတယ်လို့…
ရပ်/ကျေး ကော်မတီတွေဆီက သတင်းသဲ့သဲ့ကြားထားတယ်…
ဒီချုပ်အနေနဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ အောက်ခြေအထိဆင်းပြီး မဲစာရင်းစစ်ဖို့ ကူညီသင့်တယ်…
အခုလို အခြေအနေ ဗရုတ်ဗရက်မှာ အမောင်/အမိ ဗကသတို့ ထကြွကြလော့…
(အဲဒါမှ အထူအပါးမသိ ၊ ကိုယ့်ဖို့သာကိုယ်သိ သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာ)
ကကြောင့်လေအရဆို.. နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မှာ.. စိုးရိမ်နေရတာ.. စစ်တပ်မဟုတ်ပဲ.. ဒီချုပ်ဖြစ်နေရပြန်ပြီ..
စာဖတ်တာလဲ မျက်စေ့ ညောင်းလာပြီ
ဒါနဲ့ဘဲ ဘ၀ တွေ ပါးပါး သွားကြမှာပါ
အကို့ ကို ခင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အကို့ မှာ…
အဲလို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြန်ခေါ်လိုက်ကြတော့လေ။
ဒေါ်စုလည်း သူ့သားတွေနဲ့ အေးအေး နေပါစေတော့။
မဟုတ်လဲ သန်းရွှေကြီးကို မသိစိတ်ကရော သိစိတ်ကရော မျှော်နေကြတာပဲ။
ဘွားတော် မကောင်းများ ပြောလိုက်ပြီဆို သားရည်တများများထောက်ချင်ကြတဲ့သူတွေလေ။
Credit to Thant Htike
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တွဲပြီး မြင်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးနိုင်သည် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒီမိုကရေစီကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့အခါ နည်းလမ်းတွေထဲက “အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသောနည်း“ နဲ့ သွားမယ် ဆိုတာဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပင်မ နိုင်ငံရေး ရေစီးဖြစ်နေပြီး ဒီနည်းလမ်းကို အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ရွေးချယ်မှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး … တစ်ခုတည်းသော လမ်း ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒီတစ်မျိုးတည်း လုပ်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုနေတာမျိုး မဟုတ်ပါ။
ဒီမိုကရေစီကို သွားတဲ့ နည်းလမ်းဟာ တကယ်တော့ “အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်သောနည်း“ နဲ့မှ သွားနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ဖို့ လိုမယ်။ လိုအပ်ရင် လုပ်သင့်တာ လုပ်ရမယ်။ ဒီလို လုပ်လို့ ဒီမိုကရေစီ မရောက်နိုင်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းကို မရွေးဘဲ အခြားနည်းလမ်းရွေးမယ် ဆိုရင် … ဒီမိုကရေစီကို ရောက်အောင် သွားနိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ ခက်ခဲတာတွေ ရှိသလို မလိုလားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ကြုံနိုင်တာကြောင့် မရွေးတာသာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီကို သွားတယ်လည်း ပြောသေးတယ် … အားနေ ဆန္ဒပြနေတယ်၊ ဆူပူနေတယ် ဆိုတာမျိုး ပြောတာမျိုးဟာ .. တကယ်က လူအများရဲ့ အမြင်မှာ “အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းနဲ့ သွားမယ်“ ဆိုတဲ့ ပင်မရေစီးရဲ့ လွှမ်းမိုးအားကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး … ထိုးနှက်တာ သက်သက်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ဖို့ … လိုအပ်ရင် ဆန္ဒပြတာ၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာ၊ တရားသော နည်းလမ်းနဲ့ မတရားမှုတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် တွန်းလှန်တာ၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်တာတွေအထိ လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်။ ဒါတွေ လုပ်လို့ “ဒီမိုကရေစီ“ တန်ဖိုးကို ဘာမှ မယုတ်လျော့စေဘူး။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ မူရင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ “ပြည်သူက အုပ်ချုပ်မှု“ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဒီလို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှုတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက တန်ဖိုး မပျက်ယွင်းစေသလို … ဒီမိုကရေစီရဲ့ တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ “တန်းတူညီမျှခွင့်“ နဲ့ “တရားမျှတမှု“ ကိုလည်း မထိခိုက်စေနိုင်ဘူး။
မတရားတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တရားမျှတမှု ဖြစ်လာအောင် “လိုအပ်လာပါက“ မည်သည့်နည်းနဲ့ မဆို “တရားမျှတမှု“ ကို ဖေါ်ဆောင်ပြီး အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်တယ်။
ဒီလို အကောင်အထည် ဖေါ်တာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ရင်း နဲ့ တန်းဖိုး ဆိုတာတွေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝ မရှိပါ။ မရှိတဲ့ အပြင် ဒီမိုကရေစီကို ရှင်သန်ဖို့ ကျင့်ကြံမှုတောင် ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကို သိဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် “ဒီမိုကရေစီ“ ကို သွားဖို့ … “အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းလမ်း“ လည်းပြောသေးတယ် … အားနေ ဆူပူ ဆန္ဒပြနေတာတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ … လူထုလှုပ်ရှားမှုကို သိက္ခာချသလို ပြောဆိုနေတာမျိုးကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘဲ … အထက်က ပြောတဲ့ အချက်တွေနဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ ရယ်ပါ။
သမထအစွမ်း ရှိတဲ့ ကြောင်ဆိုလို့ ဒီတစ်ကြောင်ပဲ မြင်ဖူးတယ်
အံ့ရော. . .
ဒီမိန်းမကြီး ထက် ပိုတော်သည် ဟု ထင်ကြပါက ဒီအစိမ်းရောင် တွေ က ကိုယ့်ကို ကြောက်အောင် အရင် လုပ်ပြကြဦး လို့ ဘဲ ပြောမယ်။
အခု တော့ ဒီ အစိမ်းရောင်များ ကိုတော့ သူတို့ ဖင်တုန်အောင် ကြောက်နေပြီး မသိနားမလည် တဲ့ ကလေး များ ကိုသာ ရှေ့တွန်းပို့ နေသည်။
ရှင်တို့ သာ သူတို့ ထက် တကယ်တော်ခဲ့ ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထဲ မှာ ရှိနေတုန်း နိုင်အောင် လုပ်ခဲ့ ကြပါလား။
အဲဒီ ဝေဖန်ရေးက အသက်ဝင်တာ
သံသယ စကားနဲ့ လူထုတရပ်လုံးအတွက်
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူထု မိခင်ကို ဝေဖန်ပြော ဆိုတာကို ကျွန်တော် အပါအဝင် ခံစားနေရတဲ့( အမှန်အကန်)
သူတွေကတော့ ဦးကြောင် ကို စိတ်ဆိုးနေကြမှာအမှန်ပဲ။
(ဘာ ပြင်ဆင်ထားသလဲ။ အယင်လိုပဲ မတရားဘူး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိဘူး၊ ဆင်ဖမ်းမည် ကျားဖမ်းမည်နဲ့ပဲ ပြီးသွားကြမှာလား။)
ဆင်တွေ ကျားတွေ မဖမ်းပဲ ကြောင်ဖမ်းပြီး ရွေးဂေါက်ဗွဲ ငှက်ကထ လုပ်ခိုင်းလိုက်ရရင်ကောင်းမယ်။